स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा अस्पताल निर्माण हुने, अर्थ मन्त्रालयद्वरा ५७ अर्व ९७ करोड बजेट विनियोजन - Artha Path Artha Path
काठमाडौं । सरकारले देशभर अस्पताल नभएका क्षेत्रमा ३ सय ९६ ओटा आधारभुत अस्पताल निर्वाण गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण विचलित परेका नागरीकहरुलाई हसज र सर्वसुलव स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले देशभर एकैपटक ३ सय ९६ ओटा अस्पताल बनाउन लागेको हो ।
सरकारले स्वासथ्य क्षेत्रमा एकैपटक ठुलो मात्रामा लगानी गर्न लागेको । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाण हुने आधारभुत अस्पतालको लागी ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन । अर्थमन्त्रीका कार्यभार सम्हालेपछि नेता विष्णु पौडेलले आफ्नो कामलाई तिब्रता दिएका छन ।
मन्त्री पौडेलले अस्पताल निर्वाणाको लागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएका छन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले ५, १० र १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षिय ठेक्का प्रकृया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
कोरोनाबाट हानका निवर्तमान अध्यक्ष शाक्यको निधन
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट हानका निवर्तमान अध्यक्ष अमरमान शाक्यको निधन भएको छ । होटल एसोसियसन
बिहीबार ७ सयले घटेको सुन शुक्रबार पनि घट्यो, लगातार ओरालो लाग्दै, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । तिहार सकिएपछि लगातार तीन दिन सुनको मूल्य घटेको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य
भौतिक उपस्थितिमै कक्षा १२ को परीक्षा, कस्तो छ तयारी ?
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा पनि जनस्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुँदै भौतिक दूरी कायम